Qaabkii ay Ciidamada Amniga u fashiliyeen Qaraxii Muqdisho iyo mid kale oo magaalada ku jiro – Hornafrik Media Network
Qaabkii ay Ciidamada Amniga u fashiliyeen Qaraxii Muqdisho iyo mid kale oo magaalada ku jiro
By HornAfrik	 On Jul 8, 2019
Ciidamada Amniga ayaa ka hortagay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray oo saaka ku qarxay agagaarka Isbitaalka Digfeer, kaddib markii gaariga uu isku dayay inuu maro jid xirnaa oo carro ku go’neyd.
Gaarigan oo ahaa nooca Toyota Prada ayaa darawalka waday uu isku dayay inuu ka bootiyo carro-tuurka, balse waxaa ka shakiyay Ciidamada Amniga, kuwaasoo ku amray inuu gaariga ka dego.
Ciidamada ayaa dhowr rasaas ku riday, waxaana ciidamada ku amreen dadka inay ka fogaadaan, iyadoo saacad ku dhowaad kadib uu gaariga qarxay, iyadoo ninkii darawalka ahaa aanu gaariga bannaanka uga soo bixin.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawacyo soo gaaray Ciidamada gaariga hareereeyay, waxaana dhaawacooda yahay mid fudud, sidoo kale dad kale ayaa iyana lagu soo waramayaa in khasaare ka soo gaaray qaraxa oo ahaa mid aad tankiisa u badnaa.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ka muuqday burbur xooggan oo sababay qaraxa, waxaana muuqatay in qaraxa uu ahaa mid aad tankiisu u badnaa, isla markaana uu geysan lahaa khasaare intaas ka badnaa, haddii uu u gudbi lahaa goobaha dadka ku badan yihiin.
General Zakiya ayaa barteeda Twitterka kusoo qortay dhawr qoraal oo ay ku faahfaahineysay qaraxaas la fashiliyey waxaana qoraaladeeda kamid ahaa:
” Hay’adaha Amniga oo xogta qaraxa horay ula socday ayaa manta fashiliyay qaraxa la rabay in shacabka lagu waxyeeleeyo, dhagar qabaha ayaa is ku dayay in uu gaariga xoog ku soo jiirsiiyo goob u xiran Ciidamada amaanka”
“Waxaa hay’adaha amaanka u suurtagashay in ay xiraan goobtaas shacabkana ay ka fogeeyaan qaraxa ka hor. Nasiib wanaag wax dhimasho iyo dhaawac shacab ah kama aysan dhalanin qaraxa”
” Waxaan si gaar ah ugu mahad celineenaa shacabka xogta nala wadaagay anagoo awal digniin ka bixinay gaariga qarxay” ayey kusoo gabagabeysay.
La Taliyaha Amniga Madaxweynaha Cabdisaciid Muuse Cali ayaa ku ammaanay Ciidamada Amniga sida geesinimada leh ee ay uga hortageen gaariga qarxay ee Muqdisho ku soo socday, waxaana uu xusay in awoodda Ciidanka Booliska ay sii xoogeysaneyso, tallaabooyinka degdega ee ay uga hortagayaan iyo xirfadooda sare.
Dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in gaari kale oo qarax sida uu ku jiro magaalada, waxaana Ciidamada lagala hadlay gacanka qadka isgaarsiinta, iyadoo lagu amray inay ka hortagaan gaariga oo la sheegay in noociisu yahay kan Soomaalida u taqaano Leyla-Calaawi.
Ciidamada Amniga ayaa muddooyinkii u dambeeyay kordhiyay howlgalada lagu sugayay amniga Caasimadda Muqdisho, iyagoo xiray jidad badan oo magaalada ka mid ah.
Dowladda Oo Sheegtay In La Kordhiyay Howlgalada Ka Dhanka Ah Al-Shabaab
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Gaalkacyo Ee Gobalka Mudug